Isimanjemanje enyakatho yeScotland - I-Airbnb
Isimanjemanje enyakatho yeScotland
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Andrea
10.2.2021 Siphinde sivulekele ukubhukha kusukela ngo-April 2022 futhi silangazelela ukwamukela izivakashi ekhoneni lethu elihle lasenyakatho-ntshonalanga ne-Highlands.
Indlu yesimanje endaweni yasendulo.
Ezweni elinokwakheka kwezwe elihle, i-Assynt esezindaweni eziphakeme ezisenyakatho-ntshonalanga igqama ngokumangalisayo nge-geology yayo, izintaba, ama-loch kanye nogu. Ngamanye amatshe amadala kakhulu emhlabeni (iminyaka eyi-3.5Bn ubudala), izinsalela eziningi zezindawo zokuhlala ze-iron age, insada yezilwane zasendle, indawo yasendle nemisebenzi yezemidlalo, kuningi ongakubona nokubhekana nakho kulelikhona elikhethekile laseScotland. Ikude kodwa iyafinyeleleka, iwuhambo lwamahora ama-2 ukusuka e-Inverness unqamula indawo emangalisayo kanye nemigwaqo evamise ukungenalutho. Kangangoba, ngezikhathi ezithile zonyaka, izivakashi zivame ukubona izinyamazane ezibomvu kunezinye izimoto.
Indlu yakhiwa ngo-2011, yokwakhiwa kwamapulangwe okuqinile (okuphambene nohlangothi) okuvumela indawo yangaphakathi evulekile futhi ehlukile. Ngokushisisa okungaphansi okuvela kwiphampu yokushisa yomthombo womoya kanye nesitofu sokhuni esibasayo kanye namazinga aphezulu okushisa kuyafudumala futhi kwamukeleka unyaka wonke. Igumbi lokulala lezivakashi linomnyango walo ophumela ngaphandle kanye neshawa nendlu yangasese. Ixhunywe nayo yonke indlu ngezinyathelo eziyi-10 ukusuka ngaphakathi kwegumbi lakho. Izivakashi zikhululekile ukusebenzisa igumbi lokuhlala ‘legalari’ eliphezulu elinokubukwa okumangalisayo kolwandle oluseduze nezintaba ezikude kakhulu. Lapha yilapho isidlo sasekuseni sizonikezwa khona njengoba kukhonjisiwe kwesinye sezithombe. Sicela uqaphele ukuthi igumbi lokuhlala kanye nendawo yekhishi nayo iyindawo yethu yokuhlala emini nakusihlwa, ngakho-ke nakuba kulungile uma ufuna ukuhlala etafuleni efasiteleni le-panorama isikhashana, ngeke ekwazi ukusebenzisa lesi sikhala ngokukhululeka sengathi iyindawo ikakhulukazi ezosetshenziswa izivakashi.
Njengoba iyindlu entsha, ingadi isesimweni sokuthuthuka. Kukhona njalo amaphrojekthi aqhubekayo nezinye izinto ezizungezile, kungaba zihlobene nemisebenzi yobuciko ka-Nigel noma ngokuvamile eziphathelene nokuthuthukisa ingadi. Indlu ifinyelelwa ngethrekhi ngokusebenzisa insimu ezungezile. Kunezindlu ezimbalwa kanye nama-croft eduze, ulwandle olukwazi ukufinyelela kalula olwandle nezindawo eziningi zokuhamba nokuhlola. IClashnessie ayinazo izitolo, idolobhana eliseduze yiLochinver (amamayela angu-8) lapho kunokhetho lwezitolo, igalaji likaphethiloli, izindawo zokudlela nezinye izindawo ongazivakashela. Sicela uchofoze "Indawo" ukuze ufunde izeluleko zethu zokudla ngaphandle e-Lochinver.
Ungafika endlini ngezithuthi zomphakathi usuka e-Inverness, kodwa lokhu kungase kuthathe uhambo losuku. Ukuze uhlole indawo nokwenza kube lula ukuhamba kuyanconywa izivakashi zize ngemoto (noma ezinye izindlela zokuthutha ezizimele), nakuba kungenzeka kakhulu ukuthi zifike e-Inverness ngesitimela noma ngendiza futhi ziqashe imoto e-Inverness.
I-Assynt ivame ukuchazwa ngokuthi 'yisentshonalanga enyakatho-ntshonalanga'. Lena incazelo efanelekile yendawo kanye nesimo sezulu ngezinye izikhathi. Njengoba sisogwini isimo sezulu siyashintsha njengoba isibhakabhaka esimangalisayo nokukhanya okushintsha njalo. Ekugcineni, enye inzuzo yokuba ogwini ngomoya (wamandla ahlukahlukene) kukhona ama-midges ambalwa - ibhonasi yangempela ekuphakameni kwehlobo.
4.94 · 317 okushiwo abanye
I-Clashnessie iyindawo encane futhi ayinazo izitolo. Idolobhana eliseduze yiLochinver, amamayela ayi-8 eningizimu yeClashnessie. Kukhona futhi "i-Flossie's Beach Store" eduze komgwaqo e-Clachtoll (cishe amamayela angu-2.5) lapho ungathenga khona izinto ezibalulekile futhi uthole ikhofi noma itiye lapho uphuma noma uhamba. Seluleka izivakashi ukuthi zenze amalungiselelo okudla ngaphandle uma ungathanda ukukwenza lokho. Uma kuqhathaniswa namadolobhakazi nezindawo eziningi zase-Europe, izindawo zokudlela lapha ngokuvamile azikunikezi ukudla okushisayo kuze kube kusihlwa, ikakhulukazi ekuqaleni kwesizini noma kamuva ekwindla. Ehlobo lingase libe matasa kakhulu nalo, ngakho-ke uma ungalibhukhanga itafula kungase kudingeke ulinde isikhashana kuze kube khona itafula elitholakalayo. Ngiyajabula ukukunikeza ulwazi olwengeziwe uma kudingeka, kodwa njengomthetho ojwayelekile ngingasho ukuthi, qiniseka ukuthi ubhukha itafula futhi awuhleli ukufika endaweni yokudlela oyikhethile sekwephuze kakhulu (ikakhulukazi ekuqaleni kwesizini. (April) ezinye izindawo zokudlela aziwathathi ama-oda okudla ngemva kuka-7:30pm). Izindawo zokudlela e-Lochinver yilezi: I-Lochinver Pie Shop (ikhethekile kuzo zonke izinhlobo zophaya kodwa futhi ihambisa ezinye izitsha), I-Caberfeidh Dining Pub (ibha kanye neretshurenti), i-Inver Lodge (ekugcineni okuphezulu kwe-spectrum yamanani), i-Cala Cafe (isebenzela ibhulakufesi, ukudla kwasemini kanye nokudla kwakusihlwa kuze kube yihora lesi-8 ehlobo), Indawo yokudlela yase-Peet's (endaweni yetheku), Ihhotela i-Culag, i-Glen Canisp Lodge (i-B&B ephinde inikeze ukudla kusihlwa kwabangewona abahlali, cishe imayela nengxenye ukuya phezulu. umgwaqo wethrekhi eyodwa oxhuma kwesokunxele ukusuka kumgwaqo omkhulu). Wonke anamawebhusayithi awo uma ufuna ukwenza kancane ukuhlela phambili.